Gaazexeessaan jibbiinsa sanyummaa fi yaada walitti bu’iinsaa fuula Twiitara isaa irratti barreesse hojiirraa ari’ame – Fana Broadcasting Corporate
Gaazexeessaan jibbiinsa sanyummaa fi yaada walitti bu’iinsaa fuula Twiitara isaa irratti barreesse hojiirraa ari’ame
Finfinnee, Caamsaa 2,2011(FBC)-Gaazexeessaan BBC beekamaan tokko Biriitaaniyaatti yaada eenyummaa sanyii moototaa tuqu fuula miidiyaa hawaasaan tamsaasuun walqabatee dhaabbata miidiyaa BBC keessa ari’ame.
Gaazexeessichi hojiirraa akka ari’amu kan taasifame Biriitaaniyaatti maatii mootii keessatti iddoo guddaa kan qabu Li’uulii fi haadha manaa isaa akkasumas ijoollee isaaniirratti arrabsoo sanyummaa fuula Twiitara iisaan maxxansuun walqabatee ta’uu ibsameera.
Gaazexeessaan Daanii Beeker jedhamu kun suuraan inni Twiitara isaa irratti maxxanse abbaan warraa fi haadha warraa suufa uffatanii yemmuu Chiinpaazii qabatanii manaa bahan kan mul’isuudha.
Kun immoo maatiin moototaa ijoollee isaanii haaraa dhalatan waliin yemmuu hoospitaala bahan haala ture jibbiinsa sanyummaan mul’isuun itti qoose jechuun fudhatameera.
Sababa kanaan gaazexeessichi hojimaata BBC cabseera jchuun hojiirra ari’ameera.
Li’uul haadha manaa isaa gurraattii taate kanaan erga walfudhee eegalee miidiyaa hawaasummaarratti arrabsoo sanyummaaf saaxilamuu gabaasichi yaadachiseera.
Ayyaana Ashandaa, Shaaday, Ashandiyyee fi Soolal hambummaan galmeessisuuf hojjetamaa…
Dubartiin Ulfaa ta’uu osoo hinbariin du’a mucaasheetiif himatamte bilisa baate
Yuunvarsiitiin Goondar Dooktar Saamu’eel Saahileef proofeesarummaa guutuu laate
Namticha bakakkaan rukutamee lubbuun oole
Caaseffamni barnootaa fooyya’e
Sagantaan biyyoolessaa “Qaammee ida’amuun”…
MM Dr Abiy baga ayyaana…
Weerarri awwaannisaa baha Ityoophiyaatti mudachuu…